Frantsa : Ny Aterineto “mandroso” amin’i Sarkozy · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 30 Mey 2011 5:45 GMT
Nararaotin'ny filoha Nicolas Sarkozy ny maha-filoha mitantana ny vovonan'ny G8 2011, an'i Frantsa, ho fotoana iray hampakàrana ny làzan'ity firenena ity eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena, ary, miaraka amin'izay, eo amin'ny sehatra politika anatiny izay mikororosy. Ka inona moa no lohahevitra tsara indrindra ho amin'izany afa-tsy ny resaka fandrosoana maoderina, Aterineto ? Ny vovonana tao Deauville, ny 26 sy 27 may 2011, dia nialohavan'ny Dinika iray tao Parisy ho fanokafana azy, ny 24 sy 25 may, nomena ny anarana hoe e-G8 Forum. Saingy tao amin'io Dinika io, tsy nisy resaka afa-tsy toe-karena sy fandriampahalemana, ny zon'ny mpamorona sy ny fahatoniana, ka ireo solontena avy amin'ny governemanta sy ireo orinasa goavana no hany olona nasaina.
Hadisoam-panantenana sy Angon-tsonia
Mba nitady ihany fa he he, tsy nahita fanehoan-kevitra miabo tany anatin'ireo bilaogy miteny frantsay.#eG8 : Error progress not found, hoy ny lohatenin'ny Electron libre :
Ny sasany nilaza hoe fihaonambe tsy nisy nilàna azy, noforonina tanaty hamehana ho an'ny tanjona ara-pifidianana, ary dia tsinjo tokoa ankehitriny fa tsy manalavitra ny marina ry zareo. Ny vahoaka sy ny tontolo tsy mifatotra no isan'ireo fahabangana lehibe roa tao anatin'io dinika io izay mampisalasala be tokoa ny mety hisian'ny fiantraikany eo amin'ny ho avin'ny tambajotran'ny tambajotra.
Ity aterineto “mandroso” natolotr'i Nicolas Sarkozy ity dia niteraka ny fanangonan-tsonian'i access, G8: Arovy ny Net (amin'ny teny Anglisy, Alemana ary Espaniola), ny tolo-kevitra ho fanangonan-tsonia ao amin'ny Avaaz, ny Fanambaràna avy amin'ny Fiarahamonina Sivily ho an'ny G8 sy e-G8 ny amin'ny Quadrature du Net tamin'ny 24 mai, ary ny ahiahin'ny CNIL.
Reporters sans Frontières, hany fikambanana niaraka tamin'ny Electronic Frontier voaasa hanatrika ny e-G8, dia niampanga, amin'ny hoe “Ireo ezaka hifehipehezana ny Net” :
ny fisian'ny fitondrana mitanila eo amin'ny kabary nataon'ireo demaokrasia samihafa sy ny zavatra tena ataony, amin'ny fanondroana ny fomba nitantanan'ny mpitantana Amerikana ny raharaha WikiLeaks. Tsy afa-bela amin'izay ireo demaokrasia hafa sasany: ”Mora ny hoe miaro ny fahalalahana miteny any Siria, nefa ilaintsika koa ny manao toy izany any Italia, Aostralia ary Frantsa”.
Talohan'ny nampahatsiahivana fa i Frantsa dia ao anatin'ny lisitr'ireo “firenena ambany fanarahamaso”.
Fandalinana lalina ny fanomezan-toky
Tsara fanombohana anefa ny zavatra rehetra tamin'ny May 2010, niaraka tamin'ny tetikasa hiarovana ny fahalalahana maneho hevitra eo amin'ny aterineto, nentin'ilay minisitry ny raharaham-bahiny taloha Bernard Kouchner. Leo, ilay gazety mpiseho isan-kerinandro Marianne dia mamoaka ny fomba ataon'ilay “cyber-président” Nicolas Sarkozy ” nanapahana ny hetahetan'ny Quai d'Orsay hametraka ny Vohikala ho sehatra ivelaran'ny zon'olombelona” :
Ireo lohahevitra voalahatra fony fitantanan'i Kouchner, ny hany sisa tavela dia ny fampivelarana ny ara-toekarena, ny fandriampahalemana, ny heloka bevava anaty vohikala (cybercriminalité), ny fitantanana ny aterineto sy ny Hadopi – nanjavona tamin'ny fomba misitery ny resaka fahalalahana maneho hevitra. Lasa vahiny tsy mahare fosa ao amin'ny e-G8 ireo mpanohitra eny anaty vohikala (cyberdissidents).
Ny filoha Nicolas Sarkozy tao amin'ny Dinika e-G8, sary cattias ao amin'ny Flickr CC BY-NC-ND 2.0
Ny Journal Libre dia manome izay tsara indrindra tamin'izay nambaran'ilay nasaina tamin'ity e-G8 ity:
Ny aterineto sy ny Fiarahamonina : « Aza avela hanohintohina ny zo fototry ny tsirairay hanana ny fiainany manokana sy fahavitan-tena ny Revolisiona napongatrareo. Aza avela hanohintohina ny zo fototry ny ankizy hiaina anaty fiarovana azy amin'ireo gidragidran'ny olon-dehibe ny teknolojia notrandrahanareo. Aza avela hivoy faharatsiana, tsy misy sakantsakana sy fandinihan-tena ny revolisiona natombokareo. »
Aterineto, sakaizan'ireo demaokrasia sa fitaovan'ny be sandry?
Ireo mpiaro ny fiarahamonina sivily dia manana fijery hafa ny atao hoe Aterineto. Korben mahita fa “mampivanàka” ity “Aterineto mandroso” ity :
Ny aterineto angamba no fitaovana tsy ampy teo an-tanàn'ny olombelona hanakàrany ny nofinofiny.
Tena ny mifanohitra tanteraka amin'izany ny eG8. Izy io dia fitaovana, na ny mety kokoa dia dokambarotra goavana ilain'ireo mpanao politika mba hiverenana hifehy indray zavatra iray votsotra teo an-tanan-dry zalahy. Ny eG8 dia bling bling miezaka manakona ny anjara masoandron'ny Aterineto.
(…) ny aterineto manome fitenenana ny daholobe, manome vahana ny fanovozam-pahalalana sy ny fifampizaràna, manome elatra ny demaokrasia. Aterineto iray lavitry ny teritery, sy ny sivana isan-karazany.
Ho an'i Pixellibre, mahatsikaiky ilay fepetra ary izany no nahatonga ny “vava be nataony” ho an'ny filoha Sarkozy :
Arakaraky ny hanendrikendrehana ny aterineto ho faritra iray tsy misy lalàna tokony hotampenam-bava, dia hanaitra zavatra iray izay tsy ho voafehinao velively ianao ary, minoa ahy andriamatoa, hivoaka sisiny amin'io lalao io ianao.
(…) Mba omeo haja kely ihany ny fahalalahana maneho hevitra sy ny bilaogera, miresaka ny fiainan'ny zanak'olombelona izahay, ny zo tena fototry ny fahafahana… ary ianao miresaka ny HADOPI…tena mbola tsy takatrao marina ny lanjan'ny Aterineto.
Ny vohikala reflets.info dia manadrohadro ireo “goavana amin'ny fandalàna ny Aterineto malalaka, misokatra ary tsy miandany”, dia ireo goavana eo amin'ilay sehatra, ny mpivarotra ny teknolojian'ny sivana, ary miteny ao anatina andian-dahatsoratra, mba
hanolotra ireo teknolojia, ny fampiasàna ary ny mpandray anjara amin'ny Deep Packet Inspection (rohy wikipedia). Ireo « fantatra», toy ny Qosmos, Alcatel, Thales, Nokia Siemens, Cisco… nefa koa ireo tsy dia fantatra loatra, izay ny anjara toerany, ny tsena irotsahany, ny vokatra aondrany, izay matetika mankany amin'ireo mpanao jadona…dia manao izay tsy hahazoantsika aina.
Ny parti pirate dia manao famintinana ireo fepetra noraisin'i Frantsan'i Nicolas Sarkozy momba ny Aterineto, izay hitany ho toy ny sivana nataon'ny sinoa:
Miafina ao ambadiky ny filazana azy ho habaka «tsy misy lalàna» sy ny finiavana «hampandroso» ny aterineto, andalan'ny fanaovana ny aterineto ho habaka iray ananan'ny governemanta fahefana feno i Nicolas Sarkozy, ary toerana ahafahan'ireo orinasa hitsikilo sy hanenjika ireo mpiondana aterineto tsy manan-tsiny, miaraka amin'izay mety ho fibolilàna rehetra haterany.
Jérémie Zimmermann, isan'ny mpamorona ny La quadrature du net, dia mamintina hoe :
Iarahantsika rehetra manana toy ny fanànana iombonana ny Aterineto, ary isika miaraka, tànantsika ho tompon'andraikitra amin'ny fiarovana ny fisokafany ny governemanta, izay eo ampototry ny fahalalahantsika.
Toy ny hoe tany ianao
Bitsika mivantana vitsivitsy :
@jerezim : Mety ho nahafinaritra ihany ilay kabary raha tsy nataony ho an'ireo lehiben'orinasa irery… #eG8 #Sarkozy
@jeffjarvis : Tamin'ny #eG8, sahala amin'ny hoe ny hiaro antsika manoloana ny aterineto no nataon'ny fanjakàna. Ny mifanohitra amin'izay, mila arovana manoloana ny fanjakana ny Aterineto
M_C_B : izao izany e, ny #eG8 dia ry zareo Amerikana tonga tao Paris mba hiteny amin'ity Tanibe Tranainy ity tsy hifehifehy ny Vohikala…. #firstimpression
@VinZ : Teny ambony sehatra ny Wikipédia dia nihevi-tena ho toy ny solontenan'ny fiarahamonina sivily #eG8 tena ankasitrahana ny fisiany eo amin'io vondrona io
Raha tsy nanaraka nivantana ny hetsika na ny fandefasana azy tao amin'ny France Télévision ianareo, Korben dia manolotra lahatsary, safidy avy amin'ireo ‘fandraisana anjara, ary ity “vela-kevitra ho an'ny mpanao gazety ity” nataon'ireo solontenan'ny fiarahamonina sivily.
Farany, ny dinika e-G8 dia ao amin'ny Twitter.
Sary : cattias ao amin'ny Flickr
30 Mey 2011, 21:48
31 Mey 2011, 03:51
Hiresaka koa -> Suzanne Lehn